China Textilener Fabric Aluminom Dining sets factory and suppliers | Sun Master
Nọmba nlereanya: WA-5121E
Ibu ibu: 280pcs/20′HQ
800pcs / 40'HQ
Agba: Black gbara ọchịchịrị/ dị ka katalọgụ dị ka arịrịọ onye zụrụ ya si
Ngwongwo ihe eji eri nri nke aluminom: Ọ bụ ogige ọhụrụ nke Pvc Mesh Textilener mere, nke bụ nke ọhụrụ ma mepụta n'onwe anyị. Dakọtara etiti aluminom na ụkpụrụ bamboo. Ọ siri ike ma maa mma.
Ụdị No. WA-5121E
Ụdị ANYANWU NKE Ibu ibu 280pcs/20'HQ 800pcs/40’Ụlọ ọrụ HQ
Isi ihe Aluminom tube Ochie okokụre na ntụ ntụ mkpuchi finishing eriri rọba ojii ojii
Nkwakọ ngwaahịa 1.Sun Master ọkọlọtọ mbupụ nkwakọ ngwaahịa.
2.According asịwo kpọmkwem arịrịọ.
Nke a bụ ubi ọhụrụ edobere nke Pvc Mesh Textilener na aluminom nwere ụkpụrụ bamboo mere. Nke a Pvc Mesh Textileneris ụdị kachasị ọhụrụ nke anyị mepụtara n'onwe anyị n'oge a, yabụ ị nweghị ike ịhụ ya ebe ọ bụla ọzọ. O nwere ike zuru ezu na-arụ ọrụ na-ehichapụ ngwa ngwa, n'ihi ya, ọ dị mma maka ịme oche oche. Mgbe mkpuchi ntụ ntụ gasịrị, etiti ahụ na-ejikọta ìhè na siri ike nke aluminom na ịma mma nke achara. Na-egosipụta echiche siri ike nke ọgbara ọhụrụ.
Maka ịgbatị oge iji ya, Ọ nwere ọtụtụ uru na ngwá ụlọ dị n'èzí ga-enwe, mmiri na-adịghị, ngwa ngwa-akọrọ, High okpomọkụ na-eguzogide, mmiri na-eguzogide. Ndị a nwere ike inyere ya aka nke ukwuu ka ọ ghara ịnwụ anwụ na mmiri ozuzo ogologo oge. Ya mere, ndị a na-enyekwa ya ohere iji n'ọtụtụ ebe dị n'èzí, dị ka ọdọ mmiri, mbara ihu, ubi.
Njikwa oghere na-ewu ewu ugbu a, ngwaahịa a na-agbasokwa usoro ahụ, na-arụ ọrụ stackable, ọrụ a nwere ike ịmepụta nke ukwuu mgbe onye ọrụ kwesịrị ịhazi oghere ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị oke ọkụ, n'ihi ya, ọbụna ụmụ agbọghọ ekwesịghị ịtụ egwu na ngwá ụlọ dị arọ nke ukwuu ịkwaga.
Sun Master abụghị naanị ụlọ ọrụ OEM & ODM nwere ahụmịhe ọkachamara karịa afọ 20 na arịa ụlọ dị n'èzí, mana ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepe emepe ụdị ọhụrụ oge ọ bụla. Anyị nwetara BSCI na ISO9001:2015. Ahịa mbupụ anyị bụ tumadi United States na mba Europe maka afọ 20.
Ngwá ụlọ anyị dị n'èzí nwere atụmatụ ndị a:
1) nhọrọ siri ike maka akụrụngwa dị ka aluminom na igwe anaghị agba nchara iji hụ na mma kacha mma site na mmalite
2) ihe akaebe mmiri, nguzogide snow, ihe akaebe ihu igwe
3) UV na-echekwa akwa akwa na akwa dị elu dị elu ngwa ngwa
4) Environment enyi na enyi ihe onwunwe na imewe
5) Enwere ike ịhazi ya maka akara nha agba na ihe ndị ọzọ achọrọ
Anyị nwere ọtụtụ ndị mmekọ azụmahịa n'ụwa niile maka afọ sochirinụ. Anyị bụ ndị na-ebubata ngwá ụlọ maka ndị isi 500.
Arụ ụlọ anyị niile tozuru oke site na ule SGS. Anyị nwere usoro nhọrọ siri ike kwupụta onye na-eweta akụrụngwa anyị, ka anyị wee hụ na ihe kacha mma na gburugburu ebe obibi dị mma na mbido.
Ezigbo enyi, Ọ bụrụ na ịchọrọ nlele n'efu, katalọgụ nwere ndepụta ọnụahịa nke imewe kachasị ọhụrụ. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na email:terry@sunmaster.cn susan@sunmaster.cn Obi dị anyị ụtọ karịa inye aka.
Nke gara aga: N'èzí All Aluminium Garden Bistro set
Osote: Ogige ọgbara ọhụrụ Rattan Wicker Round Bar Stools
Aluminom oche iri nri
Ntọala iri nri aluminom
Ntọala iri nri ubi
Oche erimeri n'èzí
Ntọala iri nri n'èzí
N'èzí stackable oche
Patio nri oche
Oche nri Rattan
Nri nri Rattan
Oche ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Oghere dị arọ na-adịgide adịgide Stable Outdoor Patio Furni...
Na Tebụl edobere N'èzí Okpete Rattan Furniture Pat...